फलामको सांग्लाले बाँधिएका एकै परिवारका ३ दाजुभाइलाई सामान्य चेकजाँचकोलागी स्वास्थ्य चौकी लैजाँदा यस्तोसम्म गरिदिए (भिडियोसहित) – Khabar Chautari
फलामको सांग्लाले बाँधिएका एकै परिवारका ३ दाजुभाइलाई सामान्य चेकजाँचकोलागी स्वास्थ्य चौकी लैजाँदा यस्तोसम्म गरिदिए (भिडियोसहित)
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष १५, २०७७ समय: १९:३३:२५
सर्लाही । सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकामा फलामको सांग्लाले बाँधेर राखिएका तीजजना दाजुभाईलाई यतिबेला उनीहरुको उपचारकोलागी अस्पताल लगिएको छ । एकै परिवारका तीनजा कार्की दाजुभाईहरु मानसिक रोगी भएपछि उनीहरुको बुवा यतिबेला निकै नै तनावमा छन् । एकपछि अर्को गर्दै छोराहरु मानसिक रोगी हुँदै गएपछि उनी तनावमा परेका हुन् । यतिमात्रै नभई छोराहरुको अवस्था देखेर अहिले त उनकी श्रीमती पनि सोही रोगको शिकार भएकी छन् ।
आर्थिक अभावका कारण छोराहरुको उपचान गर्न नसकेको बताउँदै बाबुले एक अन्तरवार्तामा आफ्ना छोराहरुको उपचार गरिदिनकालागी सबै समक्ष हात पनि जोडेका थिए । खोजे त देउता पनि भेटिन्छ भन्ने उखानलाई शिरोधार गरेर हिंड्ने हामी ती कार्की बुवाको इच्छालाई पनि ईश्वरले सुनिदिए भन्दा अतियुक्ति नहोला । छोराहरुलाई उपचार कसैले गरिदिए हुने थियो भन्ने उनको ईच्छा पुरा भएको छ । अहिले उनका तीनैभाई छोराहरुको सामान्य स्वास्थ्य अवस्था जाँच्नकोलागी स्वास्थ्य चौकी लगिएको छ ।
स्वास्थ्य चौकीमा उनीहरुको व्यवहारलाई हेरेर त्याहाँका मेडिकल अधिकृतको रुपमा कार्यरत डा. स्मृति गौतमले अन्य दुई दाजुभाईको तुलनामा कान्छाको अवस्था अलि नाजुक नै भएको बताएकी छन् । स्वास्थ्य चौकीमा पनि कान्छाको व्यवहार अरु आफ्ना अन्य मानसिक रोगी दुई दाजुभाईको तुलनामा फरक नै देख्न सकिन्छ । उनीहरुको विषयमा डा. स्मृतिले के कस्तो सल्लाह दिएकी छन् त भन्ने कुरा जान्नकोलागी तलको भिडियोमा क्लिक गर्नु होला । भिडियोसहित
क्रमिक रुपमा मानसिक रोगको शिकार भए उनका जेठा छोरा त्यसपछि साईलो छोरा र अहिले कान्छो छोरा पनि मानसिक रोगी भएको हुनाले उनका श्रीमती पनि मानसिक रोगी भएको कुरा गाउँलेले बताए । घरमा सबै जना यो मानसिक रोगबाट ग्रसित बनेपछि निरोगी रहेका ती बृद्ध बुवालाई यो कुराले निकै नै तनाव दिईरहेको छ । छोराहरुको कमाई खानेबेला छोराहरुलाई फलामको सांग्लाले बाँधेर घर भित्रै थुनेर राख्नु पर्दा कुन चै बाबुको मनले थाम्न सक्ला र रु
छोराहरुसंगै अहिले त जीवन साथी पनि त्यही रोगको शिकार भईदिंदा उनी झनै तनावमा छन् । परिवारको यो अवस्थालाई उनले आफ्ना दुई हात जोड्दै रुँदै सहयोग गरिदिन यसरी अपिल गर्दछन्,‘के गर्ने होला रु कसो गर्ने होला रु लौन कसैले मेरा छोराहरुको उपचार गरिदिनु पर्यो । यीनीहरुको यस्तो अवस्था हेरेर म कसरी बाँचु रु’ उनका माइला छोरा भने पहिला नै छुट्टीएर बसेको हुनाले माईला छोरा भने ठीकै भएको कुरा गाउँलेले बताए । भिडियोसहित